Clane - n'ime Kildare
Gaa 32km site na Dublin ịchọta Clane, obodo mara mma na -ele Osimiri Liffey na County Kildare. Choputa mkpọmkpọ ebe akụkọ ihe mere eme nke Chọọchị Bodenstown mgbe ochie, chọpụta oke osimiri zoro ezo nke Coolcarrigan House & Gardens, ma ọ bụ megharịa okporo ụzọ obodo wee mikpuo ọmarịcha ala.
Ọ dị n'etiti Maynooth na Naas, ebe Osimiri Liffey na Grand Canal na-eru nso, obodo Clane nwere akụkọ ifo na akụkọ ihe mere eme. Obodo a nwere njikọ na St Patrick ama ama n'ụwa na onye ode akwụkwọ ama ama, James Joyce. N'ebe dị nso, ị ga-ahụ obodo dị jụụ nke Robertstown na Lowtown n'akụkụ Grand Canal. Na mbụ hives nke bustling waterside ọrụ, taa ị nwere ike ịnụ ụtọ a ntụrụndụ ọwa mmiri njem, ịkụ azụ ma ọ bụ n'ezie na-n'ime ime obodo site igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ ụkwụ.
Ebe kacha mma na Clane
Ngwakọta ihe nketa pụrụ iche, ijegharị osisi ọhịa, ụdị dị iche iche dị na mbara igwe, peatlands, ubi ndị mara mma, njem ụgbọ oloko, ugbo anụ ụlọ, akụkọ ifo na ndị ọzọ.
Naanị ebe egwuregwu egwuregwu mba ụwa nke Ireland na-eme nkuzi ọzụzụ ịnya ụgbọ ala, mmemme ụlọ ọrụ na mmemme n'ime afọ niile.
Leinster nnukwu osisi mkpuchi bụ ihe na-adọrọ adọrọ nke dị na mpụga Ọganihu na ime obodo ugwu Kildare.
Nkwari akụ Westgrove
Na mpụga nke Clane Village ụlọ nkwari akụ a jikọtara ịnweta na mmetụta nke ịpụ n'obodo ahụ.
Onye ndu Ireland na nchụso obodo dị na mpụga, na -enye Clay Pigeon Shooting, Air Rifle Range, Archery na Equestrian Center.
Ihe omume kacha mma maka ndị nọ n'afọ iri na ụma na Kildare
Ọmarịcha okooko osisi: ọmarịcha ubi Kildare
Afọ 25 Na: Lullymore agbanyela mgbọrọgwụ na Kildare
Kildare oge ochie & Ndị eze nke Leinster
Chọpụta ihe ndị ọzọ na Clane
N'ehihie TeaHotelsmmefu ego
Manzors Obodo Nta Obodo
Obodo ezumike ezumike nke Robertstown